Noodles nehuku uye zucchini nyonganisa fry | Kicheni Mapepa
Chicken uye zucchini noodles
Ose maviri masaradhi uye pasita inzira huru paunenge uchida kugadzira chinhu nekukurumidza. Vaviri vanobvuma musanganiswa wakasiyana wezvinhu sekuperekedza, kugona kutora mukana kune izvo zvava kuda kukanganisa mune yedu patry kana firiji. Aya ndiwo mashandiro echikafu ichi noodles nehuku uye zucchini.
Mamwe mazamu ehuku apa, hafu zucchini ipapo… zano raive rekugadzira nzira yekubika yaive nezvose zviri zviviri. Ndingadai ndakavasanganisa nemupunga, pamwe nezvimwe zvinomera zvakasvibira kana chero imwe mhando yepasta, asi ndakafunga kushandisa manoodles. Iwe unotsunga kuzviedza here?
Iwo maNoodles ane zucchini uye huku ari nyore kugadzirira uye anopihwa achiperekedzwa nemwaka wakakosha kwazvo unobva pamafuta emuorivhi, soy uye tahini.
Imba yekicheni: China
Kubika nguva: 25 M
2 chubby huku mazamu
½ zukini yepakati
160 g. yemaodles
3 supuni yemafuta omuorivhi
2-3 tablespoons sesame paste (tahini)
3 tablespoons soy muto
2 tablespoons tsvuku yewaini vhiniga
Tinounza mvura kumota mune casserole. Kana mvura yatanga kuvira, zvishoma wedzera munyu uye wedzera huku. Isu tinodzikisa kupisa, kuvhara casserole uye kubika maminetsi gumi nemashanu kusvikira huku yabikwa, asi nyoro, ingangoita gumi nemaviri maminetsi.
Isu tinobvisa huku kubva mumvura, rega izorore kwemaminetsi mashoma kuti iome uye tinocheka kuita mitsetse kana dice.
Nguva ngatibikei ma noodles mumvura zhinji, uchitevera rairo dzemugadziri.
Mune skillet pamusoro pepakati-yakanyanya kupisa isu sauté zucchini cheka kuita zvidimbu kusvika al dente.
Zvichakadaro, mundiro yepakati, tinosanganisa mafuta maorivhi, sesame peta, soy muto, vhiniga, huchi, mhiripiri uye yakanyoroveswa minced gariki. Isu tinoedza uye tinogadzirisa kunaka.
Isu tinoshandisa ma noodles kune pani uye sangana nehuku uye zucchini. Isu tinodiridza nekupfeka, isu tinopa akati wandei kuchinjana kune zvese uye isu tinoshumira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: kudzidziswa » Zvidyo » Pasita » Chicken uye zucchini noodles